Yangon Chronicle by pyi chit thar - issuu
July 16, Saturday ,2011 ပြောကြားသည်။
City Mart အပါအဝင် ကုန်တိုက်ကြီးအချို့နှင့်မင်္ဂလာဈေး၊
ညောင်ပင်လေးဈေးအပါအဝင် ဈေးကြီးများတွင် ရောင်း ချနေသော ကိုကာကိုလာအချိုရည် အပါအဝင်အချိုမှုန့်၊အရက်၊ဘီယာ၊စီးကရက် များမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ တရားမဝင် တင်သွင်းရောင်းချနေသော ပစ္စည်းများဖြစ်ရာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကန့်သတ်ထားခဲ့မှု ကြောင့် အစိုးရသည် အကောက်ခွန်ဝင်ငွေသန်းပေါင်းများစွာ နစ်နာလျက် ရှိသည်။
အဆိုပါ ကုန်စည်များကို ကွန်တိန်နာများဖြင့်ရေလမ်းခရီးမှ
လည်းကောင်း၊နယ်စပ်မှလည်းကောင်း လိုသလောက် တင်သွင်းလာ နေခြင်းဖြစ်ရာ နယ်စပ်ဒေသရှိ တပ်မတော်အပါအဝင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသူ ဒီကေဘီအေကဲ့သို့ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်သူများ စွာနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစု များအတွက် အဓိကဝင်ငွေလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ City
ကုန်တိုက်ကြီးများသည်လည်း နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ မိသားစုဝင်များကို လုပ်ငန်းရှယ်ယာများ ခွဲဝေပေးကာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှ တရားမဝင် ကို
သွင်းကုန်များတင်သွင်းလာမှုများ ရှိနေကြောင်း City Mart ဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဌာနက ရန်ကုန်မြို့တွင်City Mart ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာကို ဖွင့်လှစ်ထားသည့် City Mart Holding Co,Ltd အပါအဝင် လက်
မော်တော်ကားအပါအဝင်သွင်းကုန်ပေါင်းများစွာကို ပိတ်ပင်၍ ဖြစ်
မလုပ်ကိုင်ဘဲ သတင်းမီဒီယာများထံပေါက်ကြားခဲ့၍ ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒဆိုင်ရာ တစ်ဦးတည်း တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည့် ဒုတိယသမ္မတ
သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးမှ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ကြောင်း ယင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးက
Cover - 16.7.2011 (Sat)
YANGON CHRONICLE သတင်းလွှာ
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် လာမည့်နှစ်အတွက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ကာကွယ်ရေးအသုံးစားရိတ်ကို ၂၅% ထိ သုံးစွဲရန် ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ တက်လှမ်းစပြုနေသည့် နိုင်ငံငယ်လေး တစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် တိုင်းပြည်အသုံးစားရိတ်စုစုပေါင်း၏ ၂၅% ခန့်ကို သုံးစွဲမည့်ကိစ္စမှာ အလွန်များပြားနေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့ရာ တွင် တိုင်းပြည်ဂျီဒီပီနှင့်တွက်လျှင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများထက် ပမာဏနည်းပါးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့သုံးစွဲသည့် ၆%ခန့်သည်ပင်လျှင် မြန်မာ နိုင်ငံသုံးစွဲနေသော ၂၅% ထက်များစွာ ပမာဏ ကြီးမား နေ၍ ဖြစ်သည်။ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု မြန်ဆန်လွန်းသောခေတ်တွင် လက်နက်ကောင်း ဝယ်ယူရန် ငွေကြေးများများသုံးစွဲရသည်ဖြစ်၍ ၂၅%ခန့် သုံးမှသာ အခြားနိုင်ငံများနှင့် စွမ်းရည်ချင်းညီမျှသော လက်နက်ဝယ် ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် စိတ်ချရမည်ဖြစ်သည်။
သိရ့ုာတွင် ထိသုဝ့ို ယ်ယစူုဆောင်းနေသော ခေတ်မလှီ က်နက်များသည် မည်သည်ရ့န်သကိူု ရည်ရယွပ်ါသနည်းဟူသော မေးခွန်းကို စဉ်းစားကြည်လျှ့ င်မူ ပြောပလောက်သော၊ လောက်လောက် လားလား
ရန်သူမရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် မည်သို့မျှ စစ်ဖြစ် နိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသလို၊ အိန္ဒိယ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကိုလည်း ခံရခြင်းမရှိပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်အရေးကို အကြောင်းပြု၍ မကြာခဏ စစ်တပ်ချင်း ထိတွေ့မှုဖြစ်သည့်တိုင် နှစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိ သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နှင့် ရေနံထွက်သည်ဟု ယူဆရသောကျွန်းများအတွက် အငြင်းပွား မှုများရှိနေစေကာမူ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းမွန်လျှက်ပင်ရှိသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ခေတ်မှီဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ မြန်မာ့ပိုင်နက်အတွင်း မကြာခဏ ပျံသန်းဝင် ရောက်ကြသဖြင့် ယင်း လေယာဉ်များနှင့် စွမ်းအားချင်းယှဉ်နိုင်သော အမ်အိုင်ဂျီ ၂၉ တိုက်လေယာဉ်များလည်း ဝယ်ယူပြီးဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကာကွယ်ရေးတွင် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာ ပမာဏ ရှိသည်ဟု ယူဆနိုင် ပြီး အကယ်၍ မရှိသေးပါဟု ယူဆပါလျှင်လည်း တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယကဲ့သို့ အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုသာရှိလျှင် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၏ ၁၀၀% သုံးလျှင်ပင် ကာကွယ်ရန် မလုံလောက်ဟုသာ ယူဆ ရပေလိမ့်မည်။ထို့ပြင် မျက်နှာဖြူနယ်ချဲ့များ၏ရန်ကို အစဉ်အမြဲသတိရှိနေရမည်ဟူသော ဝါဒများသည်လည်း ဆိုရှယ်လစ်စနစ် နှင့်အတူ ပျောက် ကွယ် သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လတ်တလော အန္တရာယ်ပြု မည့် အနီးကပ်ရော၊ အဝေးက ရန်သူပါ မရှိသေးဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးသည် သမာရိုးကျ လက်နက်ဖြင့် ပြည်ပမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မည့် ရန်သူထက် ပုံမှန်မဟုတ်သော ရောဂါကပ်ဆိုးများ၊ ပြည်တွင်းရေးတွင် ပြည်ပမှ ဝင် ရောက်
စွက်ဖက်မှုများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံကြီးများကို အလွန်အမင်းမှီခိုအားထားရလွန်းခြင်းများ စသည့် ကိစ္စရပ်များလည်း ပါဝင်နေပေရာ ထိုသို့သော ကိစ္စရပ်များကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဟူ၍လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိပင်လျှင် တရုတ်နိုင်ငံကို အလွန် အမင်းမှီခိုအားထားရလွန်းပြီး တရုတ်၏ ဗီတိုအာဏာကို အသုံးပြု ရန် နိုင်ငံ၏ သယံဇာတ အတော်များများကို အောက်ဈေးဖြင့် ထိုးပေး လိုက်ရ ခြင်း၊ မြစ်ဆုံကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ကြီးမားလှသည့် စီမံကိန်းကြီးများကို နိုင်ငံအတွင်း ခွင့်ပြုထားရခြင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် တိုင်းရင်းသားပိုင်အမည်ခံ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် လယ်မြေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု များတိုးပွားလာခြင်း၊ မန္တလေးကဲ့သို့ မြို့ကြီးများအထိ ယူနန်ပြည်မှ တရုတ်လူမျိုး များ အကန့်အသတ်မရှိ ဝင်ရောက်လာကာ အိမ်မြေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးများ အကန့် အသတ် မရှိပိုင်ဆိုင်လာကြခြင်း စသည့် ကိစ္စရပ်များသည် သေနတ်တစ်ချက်မျှ မဖောက်ရဘဲ အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးနေခြင်းကို ပြသနေပေသည်။ ဤကိစ္စရပ် များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူစုဆောင်းထားသော စစ်လက်နက်များ သည် မည်သို့မျှ အကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်ရသည်။
ထြို့ ပင် လွတလ်ပ်သော အာဆီယံ ကုနသ်ယ်ွရေး ဥပဒေအရ မကြာမီနစှမ်ျားအတွင်း အကောက်ခနွမ်ြဲ့ ဖင့် ဒေသတွင်း နိငုင်မျာံး၏ ရင်းနှီးမြုပ်နမှံ ကှို လက်ခရံတော့မည်ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွကတ်ငွ် ကျင်သ့ား
ရနေပြီဖြစ်သော ယင်းနိုင်ငံများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလတ် စားနှင့် အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဝါးမြိုသွားဖွယ်ရှိရာ ဤသည်မှာလည်း အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ယခုခေတ်သည် သမာရိုးကျ လက်နက်များထက် ဈေးကွက်ကို ဗဟိုပြုပြီး ဥပဒေများ၊ အင်စတီကျူးရှင်းများဖြင့် တိုက်ပွဲဆင်နွဲရသည့် ခေတ်ဖြစ်ရာ အစိုးရများသည်မိမိတိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး
်ို ကာကွယန်ငို မ်ည့် ပေါ်လစီများအတွက် အသုံးစားရိတက်ို ပိမိုံးစွဲ ခြင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နမှံ မျှုား မဝင်ရောက်မီ မိမနိငို င်သာံးကို ကာကွယ်ပေးမည့် အလုပသ်မား ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ မိမနိငို င်သာံး ဈေးကွကကုသ များ တန်းတူ ရည်တူလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုသုံးစွဲထားခြင်းဖြင့်သာ ခေတ်သစ်ကိုလိုနီပြုခံရခြင်း တနည်းအားဖြင့် အချုပ်အာဏာဆုံးရှုံးရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်း သင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
မျက်နှာဖုံးသတင်းမှ စာဆက် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“အစိုးရဖြစ်နေပြီး၊ အခုလိုတိုးတိုးတိတ် တိတ်လုပ်တာတို့၊ ကျိတ်လုပ်တာတို့ကို နားမလည်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို မှောင်ခိုလုပ်စားစေချင်တာလား မသိဘူး၊
သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းမှာပြောတော့ နိုင်ငံသားတိုင်းကို ဥပဒေနဲ့အညီ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီး
နှင့်မြန်မာ့တပ်မတော်ကြား လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေ
ပြောထားတာ၊ အရင်တုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသိရင် ဘာပြောမလဲ
ခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားအရေးသာဖြစ်ကြောင်း အာဏာရပါတီဖြစ်
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကေအိုင်အို
သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူး ဦးဌေးဦးက
သေချာမသိသေးတဲ့ အချိန်မို့လို့ ဘာမဆိုခိုးလုပ်၊ ကျိတ်လုပ်ရတယ်။ အခုလဲ ဒီလိုဘဲ
ကေအိုင်အိုသည် ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့တွင် တရုတ်
သမ္မတဟူကျင်တောင်ထံသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အို မော်တော်ကားအပါအဝင်
ယင်းကဲ့သို့ စီးပွားရေးတွင် ဖြစ်ပျက်နေမှုများကို စီးပွား
များမှာလည်း ယခင်ပမာဏအတိုင်း ဝင်ရောက်မြဲ ဝင်ရောက်လာ
တိတ်လုပ်တာတို့၊ ကျိတ်လုပ်တာတို့ကို နားမလည်နိုင်ဘူး။ ကျွန်
အစိုးရ၏ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဦးသန်းအောင်အား
တော်တို့ကို မှောင်ခိုလုပ်စားစေချင်တာလား မသိဘူး၊ သမ္မတကြီး
ပြန်ကြားလိုက်သည့်စာတွင်လည်း ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ တရုတ်
ညောင်ပင်လေးဈေးမှ ကုန်သည်တစ်ဦးကလည်း “ထိုင်း
ကြား ဝင်ရောက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးရန် ပန်ကြားလွှာတစ်စောင်ပို့
ကနေ ကုန်းလမ်းက တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ကုန်စည်တွေ
အလုပ်လုပ်ခွင့် ရမယ်ဆိုပြီး ပြောထားတာ၊ အရင်တုန်းကတော့
ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ပဲ ဆိုင်တာပေါ့”ဟု ဦးဌေးဦးမှဆိုသည်။
ကအို င် အို သ ည် က ချင်ြ ပည် န ယ် လွတ် လ ပ်ေ ရးအတွ က်
မော်တော်ကားမစီးနဲ့ ဘီယာမသွင်းနဲ့ စီးချင်သွင်းချင်ရင် ငါတို့ကို
ဆက်ကြေးပေးပြီး ခိုးလုပ်စားလို့ စေခိုင်းရတာလဲ။ ပြောရရင်ဗျာ
နေပြည်တော်မှာ သူတို့နေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေဆိုတာတွေကလဲ
ချမ်းရေးရယူခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး တရုတ်
စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု
ကုန်သည်ကို ဆောက်ခိုင်းထားတဲ့ အိမ်တွေဗျ။ ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်
ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ကားလမ်းများ ဖောက်လုပ်
တင်သွင်းခွင့် ပြုရန်နှင့် တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ပြုပါက မည်ကဲ့သို့
ထားကာ ကေအိုင်အို၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ယူနန်ပြည်
အချက်များဖြင့်တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သတင်း
အတူတူပဲ” ဟု စိတ်နာနာဖြင့် အစိုးရသစ်ကို အထက်ပါ အတိုင်း
နယ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် များစွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
တင်သွင်းရင်လည်း တရားဝင်ပေါက်ဈေးက တရားမဝင် ဈေးထက်
မကြာသေးမီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကုန်သည်/
၁၉၆၀ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် အဖွဲ့ အစ ၁၉၉၄
ပြည်တွင်းသို့ စားအုန်းဆီတင်သွင်းသည့် ဆီကိုယ်စား
ငွေစက္ကူ အတု အများအပြားတွေ့ရှိရကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
အတုတစ်ရွက်နှုန်းဖြင့် တွေ့ရှိရကြောင်း၊ တစ်ရက်လျှင် ကျပ်ငါး ထောင်တန်ငွေစက္ကူအတု
မသိရှိနိုင်ကြောင်း၊ ယခင် ခြောက်လခန့်က ငါးထောင်တန်အတု တစ်ရွက်နှစ်ရွက် တွေ့ရသော်လည်း ယခုအခါ ငါးထောင်တန် အတုအများအပြားကို တွေ့ရှိရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် လီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆင်မှုများ ပြုလုပ် လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရွှေ တိ ဂုံ ဘု ရားမြောက် ဘ က် မု ဒ် ၊သွေးဆေးကန် အ နီး
ရှိ အာဇာနည်ကုန်းကိုလည်း အကြီးစားပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ် လျက်ရှိပြီး၊ယင်းပြင်ဆင်မှုများတွင်
ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်အား အာဇာနည်နေ့တွင် အများပြည်သူ
များပြုလုပ်နေကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြား သည်။
လေ့လာနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ အာဇာ
ပြုပြင်ခြင်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ချိန်တွင် ပြည်သူများဂါရဝပြုနိုင်ရန် အခမဲ့ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
၂၀၀၈ ခုနှစ် များကလည်း အကြီးစားပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊
ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သူ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အာဇာနည်ကုန်းကိုမှု မြောက်ကိုရီးယားကွန်မန်ဒိုများ လာရောက်
ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့် ခေတ္တပိတ်ထားပြီး၊ ယခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အာဇာနည်နေ့အမှီ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အမြန်ပြင်ဆင်မှု
ကျောက်တိုင်နှင့် ပရဝုဏ်အား ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျော်စွာ
ငါးထောင်တန်ငွေစက္ကူအတု ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မှာ ငွေစက္ကူ
အသားမှာ ဖယောင်းကဲ့သို့ ချောမွတ်နေခြင်း၊ ငွေစက္ကူအတုအား ဖိ၍ ပွတ်လိုက်သည့် အခါ အဖုအထစ်လေးများကို တွေ့ရှိရခြင်း၊ ငွေစက္ကူအတုတွင်
ရိုက်နှိပ်ထားသည့် လုံခြုံရေးအမှတ်အသား ရေစာမပါဝင်ကြောင်း၊ ငွေကြိုးပေါ်တွင်
မပါဝင်ကြောင်း၊ ငွေကျပ်ငါးထောင်တန်အစစ်တွင် ဆေးသားမှာ ပီပီပြင် ပြင်နှင့် ဂဏန်းပီပီသသ ရှိသော်လည်း ငွေစက္ကူအတုတွင်မူ ဆေးသားမှိန်ပြီး ဂဏန်းပီသမှုမရှိကြောင်း ဗပိာုဘဏ်မှ ငွေကြေး ဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရသစ်၏ ဟန်းနီးမွန်းကာလဟု သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်ပေါင်း (၁၀၀)အတွင်း မြန်မာအစိုးရသစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းမှ လေ့လာသူများမှ သတိဖြင့် လေ့လာ
စောင့်ကြည့်ခဲ့သလို ရန်ကုန်ခရော်နီကယ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှလည်း စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ခြင်း၏ ရလဒ်အဖြစ် ပြည်ထောင်စု အစိုးရသစ်၏ အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်သုံးရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ပြင်ပအင်အားစုတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက် အဆိုးနှင့်အကောင်းများကို တိကျသေချာစွာ သိရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းကြောင့် ထိုကဏ္ဍ ပေါင်းစုံတွင် ပါဝင်သူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအလိုက် ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်များကို ရွေးချယ်ကာ ရန်ကုန်ခရော်နီကယ်စာဖတ်သူများကို အပတ်စဉ်သတင်းလွှာမှတဆင့် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
Political News ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်
“ကျွန်တော်တို့ မနက် ခုနှစ်နာရီခွဲကတည်းက အခမ်း
အနားအတွက် ပြင်ဆင်နေတာ။ အကုန်ပြင်ပြီးမှ ပြန်သိမ်းလိုက် ရတယ်” ဟု ဦးစိုးမြင့်က ဆိုသည်။
ဦးမြင့်ကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံသင်တန်းများ ရက်တိုပို့ချရန်
စီစဉ်ခဲ့ဖူးသော ဟောင်ကောင်စီးတီးတက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ
ဘာကြောင့်ဆိုတာ ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမှာ မပြောချင်သေးပါဘူး
တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ သည်လည်း NLD တွင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပြီးမှ အစီ အစဉ်ပျက်ခဲ့ဖူးသည်။
(အင်္ဂလိပ်စာပေ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် ဘောဂဗေဒ) ဘွဲ့ကို လည်း ကောင်း၊ ကောနဲလ် တက္ကသိုလ်မှ MA(ဘောဂဗေဒ) ဘွဲ့ကို လည်းကောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘာကလေရှိ ကာလီ ဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ PhD (ဘောဂဗေဒ)ကို ဘွဲ့ကိုလည်း ကောင်း ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဦးမြင့်သည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတွင် ဝန်ထမ်းအဖြစ်
လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင်၁၂။
ရခြင်းမှာ နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတရုံးမှဦးမြင့်အား တားမြစ်မှုကြောင့်
ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကော်မရှင် (အာရှနှင့် ပစိဖိတ်
ဒေသ)၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးသော နိုင်ငံများ၏ သုတေသနနှင့်
ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသော ဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုင်ရာ
လုပ်မည်ဆိုပါက နေရာပြောင်းလဲပြုလုပ်ရန်တောင်း ဆိုခဲ့ကြောင်း
စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲအား ရွှေ့ဆိုင်းရသော အကြောင်း
အရင်းအား ဖြေရှင်းရန် သမ္မတ၏ စီးပွားရေး အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်း
ဆောင် ဦးမြင့်ဘက်မှ ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
နွေးပွဲပျက်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်” ဟုဦးဝင်းထိန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး NLD ရုံးချုပ်တွင်
ချင်သေးပါဘူး” ဟု ဦးမြင့်က ပြောကြားသည်။
ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲ၌
တွင် စတင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားခဲ့သော်ည်း ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင်မှ
မှူးရုံး၊ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းထိန်ကမူ ယခုကဲ့သို့စာတမ်းဖတ်ပွဲပျက်
ဆွေးနွေးပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကို သိခဲ့ရသည်ကြောင်း NLD ပါတီမှ
“ဘာကြောင့်ဆိုတာ ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမှာ မပြော
အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲကို ၁၁ ရက်နေ့နေ့လည်၁၁ နာရီ
ကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဦးမြင့်သည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်
ဂစ်တာတီး ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သည်။ xxxxx
(7Day News၊ အတွဲ-၁၀၊ အမှတ်-၁၇ ပါ “အခွန်နှင့် သက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ ပြင်ဆင်ရန်ဆွေးနွေး” သတင်းအား အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြသည်)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသ
ကြီးအတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်စေရန် အတွက်
စည်းကမ်းများ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ရန် ပထမဆုံးအကြိမ် စီးပွား
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းဖော်ဆောင်ရေး ဆပ်ကော်မတီကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်
အခွန်ဦးစီးဌာမှ တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံသည်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်
ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာလအထိတိုင် ၅ စီမံကိန်း
ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား
ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့နေလူတန်းစားများနှင့် ကျေး
ထို့ပြင် မကြာသေးမီကာလအတွင်းကလည်း ပြည်တွင်း
အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ယခင် ပို့ကုန်ခွန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံနေရာမှ
ယခုအခါ ၇ ရာခိုင် နှုန်းသို့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့၍ပို့ကုန်ခွန်
ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် ကျေးလက်နေ
ကောက်ခံရန် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လူတန်းစားမှာ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီးတွင်မူ ချမ်းသာသည့်သူများမှာ ပိုလျှံအောင် ချမ်းသာ
တွက် ယခုကဲ့သို့ ပို့ကုန်အခွန်လျှော့ပေါ့ ကောက်ခံမှုကို စီးပွား
ရေးလုပ်ငန်းရှင်များက အထူးကြိုဆိုကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပို့ကုန်အခွန်ကောက်ခံနေမှုကို
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအုပ်စုကြီးမှ ၁၀ ခု၊ ပြည်ထောင်စု
ဈေးကွက်တွင် ဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု မြင့်မားလာနိုင်စေရန်
ပို့ကုန်တင်ပို့မှုများအပေါ် ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး တွင်မူ မိမိနိုင်ငံမှ ပို့ကုန်များ နိုင်ငံတကာ မပြုလုပ်တော့
၎င်းအခွန်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ရေး
ရာခိုင်နှုန်းထိတိုင်လျော့ကျ သွားနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချ၍ အခွန်ကောက်ခံမှု ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း
အသင်းချုပ် အသင်းဝင် ကုမ္ပဏီငါးခုနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်
မရှိခဲ့ဘူးကြောင်း ၎င်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် စီးပွား
ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ
ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်မှ စတင်၍ အခွန်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊
လီမတီက်နငှ့် သက်ဆငို ရ်ာတာဝန်ရသှိ မျူား တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း
(ပြည်သူ့ခေတ်၊ အတွဲ-၁၊ အမှတ်၅၁ ပါ “ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) မှ အတွင်းရေးမှူး ၂ ဦး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်”
အလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့ရုံးမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်အရ
အသက်ပြည့်မီမှုမရှိဘဲ တပ်မတော်တွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည့် ကလေးသူငယ်များအား မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ပြန်လည်အပ်နှံ
နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် လွှတ်တော်
အတွင်းရေး မှူးချုပ် ဒေါ်သန်းသန်းနုက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်လိုက်သည့် ကလေးအရေအတွက်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁
ရက်နေ့ထိ ၁၇၂ ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)မှ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချိုချို
ကျော်ငြိမ်းကလည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ရောက်သည့်
ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်
ကလေးသူငယ်အခွငအ့် ရေးဆုငိမ်ျားဆိငုရ်ာ ကနွဗ်င်းရှင်း စာချုပ်ကို
တော့မည်မပာုတ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်
သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ
သည်ဆိုသည်မှာ နိုင်ခြင်း၊ ရှုံးခြင်းသည် အဓိက မပာုတ်ဘဲ
၁၅ ရက်နေ့တွင် CRC စာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၁၉၉၃
တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် ဝင်
ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် မည်သည့်ရာထူးမှ မလို
ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကလေးသူငယ် ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့
ကြောင်းသိရသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်ဆဲဥပဒေများ၊
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များတွင်လည်း အသက် ၁၈ နှစ်အောက်
(မြန်မာ)မှ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်သန်းသန်းနုသည် မန္တလေးတိုင်း
ကလေးသူငယ်များအား တပ်မတော်တွင်း စစ်မှုထမ်းခိုင်းခြင်းကို
တားမြစ်ထားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တပ်သားသစ်များ
စုဆောင်းရာတွင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီဆောင်
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မည် မပာုတ်ကြောင်း သိရ သည်။
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းသည် ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်မှ
ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အသက်ပြည့်မီမှု မရှိသေးသည့် ကလေးသူငယ်
ပြည်သူ့လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရှုံး
များအား စစ်မှုထမ်းခိုင်းခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အရွယ်မရောက်
ယှဉ်ပြိုင်တော့မည်မပာုတ်ကြောင်း၊ ထပ်မံပြုလုပ်မည့် ကြားဖြတ်
သေးသူ ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး
ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ပါက ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့်
မည်မျှရှိမည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်သေးကြောင်း၊ ပါတီစည်းရုံးရေးမှာ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးသန့်ဇင်အား ရွေးကောက်ပွဲ
အကြောင်းများကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝင်ရောက်မပြိုင်
မသမာမှုအဖြစ် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းရာတွင်လည်း အမှုရှုံးနိမ့်ခဲ့
အရာရှိနှင့် တပ်သားနှစ်ဦးကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူ
တော့ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)မှ
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Ref; Weekly Eleven)
ဒေါ်သန်းသန်းနုနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းတို့သည် မိမိအနေနှင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်
ထို့ပြင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)မှအတွင်း ရေးမှူး ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်
သည်။	ထြို့ ပင် ယခင်က တပ်မတော်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား စစ်သားစုဆောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့၌ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၀။
“ဇွန်လကုန်ကတည်းက ပူတာအိုက ခရိုင်ရဲမှူး ဦးမော်ထွန်းဆီကို
စုကြည်ထံ ဥပဒေနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကြားစာ
ပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
ဇာရွာနှင့် ဒဇယ်ထုရွာကြားတွင် နော့မွန်း - မချမ်းဘော လမ်း
ပြည်နယ်အစိုးရကို တိုင်မလို့စီစဉ်နေတယ်” ဟု အဆိုပါ လမ်း
အဖွဲ့ချုပ်အား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် တိုက်တွန်းသည့်
အား ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့က ပြုပြင်နေစဉ် ရဲများက ကချင်
လုပ်သားများအား ကူညီလျက်ရှိသည့် ကချင်ပြည်နယ် ဒေသခံ
လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(ကေအိုင်အေ) ဟုစွပ်စွဲကာ နှိပ်စက်
တစ်ဦးဖြစ်သည့် ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာ ဦးဖလားနော်ဒင်းမ်က
ညှင်းပန်းခြင်းခံခဲ့ရသော လမ်းလုပ်သားများက ပြည်နယ် အစိုးရသို့
တိုင်ကြားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
နော့မွန်း-မချမ်းဘော လမ်းအားပြုပြင်နေသော ဦးချန်းဒီး
တရားရုံးသို့ အခင်းဖြစ်သည့်နေတွင် သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့သော်
ရမ်(ရပ်ဘော့ရွာ)၊ ဦးချန်းခင်ရမ်(ဂတ်ထုရွာ)၊ ဦးချမ်းဆင်ရမ်(ဒန်
လည်း တရားရုံးမှ ရဲအရေးပိုင်သည့်အမှု ဟုဆိုကာ လက်မခံခဲ့
စုကြည် တို့အနေဖြင့် လက်ရှိအခြေ အနေတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ
ပါတီပြန်လည် ထူထောင်ပိုင်ခွင့် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊
ကချင်ပြည်နယ် နော့မွန်းမြို့နှင့် ၁၀ မိုင်အကွာရှိ မကွေ
၎င်း ဆောင်းပါးမှာ စာရေးသူပြည့်စုံအောင်ရေးသားထား
သည့် ‘ရွေးချယ်ခွင့်လက်ထဲမှာ’ ဆောင်းပါးပင်ဖြစ်ကြောင်း သိရ ဆောင်းပါး၌
လမ်းလုပ်သား ၁၂ ဦးသည် နေ့လည်ခင်း နားနေစဉ်အချိန်တွင်
လျော်ကြေးငွေ ငါးသိန်းပေးအပ်မည်ဟုပြောခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
လတ်တလောကာလအတွင်း၌ ပါတီသစ်ထူထောင်ခွင့် လျှောက်
ထားနေကြသူများ၏ သတင်းများကိုသတင်းစာများတွင် တွေ့မြင်
ပြီး ”ကချင်မှန်သမျှ ကေအိုင်အေပဲ”ဟုဆိုကာ အဆိုပါလမ်းလုပ်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာက “ဒီလိုမျိုး ပြည်သူ
နေကြရကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်လည်း ပါတီ
သားများအား နှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာစကား အနည်းငယ်ပြော
ဘက်ကတိုင်တဲ့အမှုကို လက်မခံရင် တရားရုံးက ဘယ်အမှုတွေ
နိုင်ငံရေး အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်လိုသည်ဆိုပါက ဥပဒေနှင့်
တတ်သော ဦးချန်းဒီးရမ်မှ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ရာ ဒုရဲအုပ်
ကိုလက်ခံမှာလဲဆိုတာ ကျွန်မသိချင်တယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အညီ ပါတီထူထောင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ပါတီတည်ထောင်ရာ၌လည်း
သောင်းထွန်းမော်မှ ၎င်းအား သေနတ်နှင့် ပစ်ရန် ချိန်ရွယ်ခဲ့ကြောင်း
အမည်သစ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ အမည်ပောာင်းနှင့်ပင်ဖြစ်စေ တရားဝင်ရပ်
အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှာ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို
ကြောင်း၊ ထို့နောက်နှစ်နာရီခန့် ဒူးထောက်ခိုင်းပြီး ဆက်လက်
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များတွင် အင်အား
အသင့်အတင့််ရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် မြန်မာ
သက်ဆငို ရ်ာကော် မရှငအ်နေဖြင်လ့ည်း ခွငမ့် ပြုနိငုစ်ရာအကြောင်း
ကြစဉ် မိမိအပါအဝင် လမ်းသွားလမ်းလာများမှတွေ့ပြီး နော့မွန်း
မရှိနိုင်ကြောင်း၊ ကောင်းသောလုပ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား
မြို့မှတဆင့် ပူတာအိုသို့ တိုင်ချက်ဖွင့်ရန်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း ဦးဖလား
ပွားနေခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲကြောင့် လူပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော် နေရပ်
ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ (Ref; ပြည်သူ့ခေတ်)
ငွေကြေးနှင့် ပါတီဝင်အင်အားတောင့်တင်းသည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အဓိက အတားအဆီးဖြစ်သည်
ရာ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် လျာထားပြီး ဝံသာနုNLD(ပြည်ထောင်
အစိုးရသစ်လက်၌ ၎င်း ICRC အဖွဲ့သည် ပထမဆုံးအကြိမ်
ချင်းအမျိုးသား တိုးတတ်ရေး ပါတီနှင့် ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီ
အဖြစ် ဘားအံနှင့် မြောင်းမြ အကျဉ်းထောင်များတွင် သွားရောက်
ပါတီမှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မဲဆန္ဒ
လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး လာမည့် စက်တင်ဘာလ၌ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
နယ်နေရာ လျာထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
အကျဉ်းထောင်သုံးခုဖြစ်သည့် မြောင်းမြ၊ ဘားအံနှင့် မော်လမြိုင်
ပါတီများမှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေး
စွမ်းအင်သုံး ရေတင်သည့်စနစ်များဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင် ထိန်း
သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း
စာရင်းထဲ၌ မပါဝင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်များတွင်လည်း ဝင်ရောက်
သိရသည်။ ထို့ပြင် အစိုးရသစ်နှင့် အဆင်ပြေပါက အခြားအကျဉ်း
အရွေးချယ်ခံမည့် သူများထပ်တိုးလာနိုင်ကြောင်း ၎င်းကဆက်
သည် မဲဆန္ဒနယ် ၂၀ ကျော်၌ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးချယ်ခံရန်
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် လျာထားသည့် အချို့မဲဆန္ဒနယ်များတွင်
လျာထားကြောင်း ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေပါတီ အဖွဲ့ဝင် ပါတီတစ်ခုမှ
Committee of the Red Cross အဖွဲ့သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်
ထပ်လျှက်ရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေပါတီ
တွင် မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ရုံးများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး အကျဉ်း
များထဲမှ တစ်ပါတီတည်းသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်
ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့သည့် အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၀၆
အတွက်မှာအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီမှ မဲဆန္ဒနယ်
မည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလ
ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်ထက်၌ ICRC လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်း
မဲဆန္ဒနယ် (၁၅)နေရာ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)မှ မဲဆန္ဒ
တို့တွင် ကျင်းပနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လွှတ်
နယ်(၂)နေရာ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီမှ မဲဆန္ဒနယ်
တော်တငွ်း လစ်လပ်ကယို စ်ားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ရန် မဲဆန္ဒနယ်
ထပ်မံ၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဝင်ရောက်
(၁)နေရာ၊ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ မဲဆန္ဒနယ်(၁)နေ
ပေါင်း ၄၂ နေရာရှိကြောင်း သိရသည်။
လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Ref; မြန်မာပို့စ်)
(Hot News၊ အတွဲ-၁၊ အမှတ်-၄၈ ပါ “မှတ်ပုံတင်ကြားပွဲစားများ အရေးယူမည်” သတင်းအား အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြသည်)
ရွက်ချက်များ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မှုခင်းသတင်းများကို ဖော်ပြမည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအာဘော် သတင်းဂျာနယ်အား ထူးကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်၍ အပတ် စဉ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခု ထုတ်ဝေမည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအာဘော်
သတင်းဂျာနယ်အား အဓိကအားဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌ ဖြစ်ပျက်နေသည့်
ဧရာဝတီတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့၏ ဒေသအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ ပြုလုပ်ပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံ
လုပ်ရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်နိုင်စေရန် ဖြေလျော့ သည့်အနေဖြင့်
သားများ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာတွင် ကြားပွဲစားများကို သက်ဆိုင်
အချက်(၆)ချက်ကို အဓိကထားတင်ပြရုံဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရရှိမည်
ရာမှ အရေးယူဆောင် ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်မည့်သူတိုင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံ
တင်ဦးစီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေး
သိမ်းဆည်းထားပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍
သတင်းဂျာနယ်သည် အစိုးရထုတ်ဝေသည့် ပေါ်လစီသတင်းစာ
ကဲ့သို့မပာုတ်ဘဲ ပြည်ပမီဒီယာများရှိ သတင်းဂျာနယ်များကဲ့သို့
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ သည်။
ယခုထုတ်ဝေမည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အာဘော်
ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူများ အသိပညာ၊ ဗပာုသုတရရှိ
ဆိုင်ရာဝန်ကြီှးဌာနမှ ၎င်းမှတ်ပုံတင်ကြားပွဲစားများကို တားဆီး
အရေးယူ ဆောင်ရွက်တော့မည်ဟု သိရသည်။
ဖြစ်ထိုက်သည့် သတ်မှတ်ချက်၊ အရည်အချင်းစနစ်နှင့် ကိုက်ညီ
သူတိုင်း မှတ်ပုံတင်ကဒ်ရရှိစေရန် လွယ်ကူစွာရရှိဆောင်ရွက်နိုင်
ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ဖြေေ
ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ မူပိုင်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း
အချက် (၁၁) ချက်ပြည်စ့မုံ သှာ မှတပ်တုံ င်ရရှရိန် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး
လျာ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ပြောကြားခဲ့သည်။ (Ref; Hot News)
ယခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှ စတင်၍ ပြည်သူများ မှတ်ပုံတင်ပြု
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား
စေနိုင်မည့် ကဏ္ဍများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဝယ်ယူ ပြည်သူများ
(7Day News၊ အတွဲ-၁၀၊ အမှတ်-၁၇ ပါ “ဘဏ်တိုးကြောင့်ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်အချို့ မြန်မာဘဏ်များတွင် ငွေအပ်နေ” သတင်းအား အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြသည်)
ရန်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများရရှိလာနိုင်စေရန် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘဏ်များမှ အပ်ငွေအပေါ် ပေးသည့်
ဘဏ်တိုးနှုန်းမှာ ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်တိုးနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက
သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းကိစ္စရပ်အား လေးလေးနက်နက်
၇ ရာခိုင်နှုန်းပိုမို များပြားသည့်အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသား
လုပ်ငန်းရှင်အချို့ပင် အပ်နှံမှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်တိုးနှုန်း မြင့်မားနေသည့်
တင်းဆုံးဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကြားတွင်
အပ်နှံရာတွင်ဘဏ်တိုးနှုန်းမှာ ဘဏ်ချေးငွေဆိုပါက ၅ ရာခိုင်
ရန်ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြတ်သွားမှပင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
နှုန်းယူပြီး ဘဏ်အပ်ငွေ ဆိုပါက ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပြန်ပေးကြောင်း
ဘဏ်များတွင် လာရောက်အပ်နှံ ကြကြောင်း သိရသည်။
စတီးဝဲလ် လမ်းမကြီးပြန်လည်ဖွင့်မည်ဆိုပါက ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်း
၎င်းကိစရ္စ ပ် အပေါ် အမြတ်ထတု အခွငအ့် ရေး ယူနေသည့်
အများအပြားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများ အများ
လုပ်ငန်းရှင် များကို ပုံစံသုံးမျိုးဖြင့် တွေ့ရပြီး ပထမအမျိုးအစားမှာ
အပြားရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းစီးပွား ရေးပညာရှင်
ငွေအပေါ် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းပေးကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ
ဘဏ်များမှ အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့် ဘဏ်တိုးနှုန်းမှာ ပြည်ပ
လုပ်ငန်းရှင်က ပြည်ပဘဏ်မှ ငွေပြန်ထုတ်၍ပြည်တွင်း ဘဏ်
နိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များမှ အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့် ဘဏ်တိုးနှုန်းနှင့်
နှိုင်းယှဉ်ပါက ၇ ရာခိုင်နှုန်းပိုမို များပြားကြောင်း သိရသည်။
အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ရှိ ဘဏ်များတွင် ငွေသွားရောက်
ထို့ပြင် အာရှနိုင်ငံများ၌ စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံနှ
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှ၌ စီးပွားရေးအင်အား အတောင့် ၎င်းနှစ်နိုင်ငံမှ
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုပါက အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်ကြားနယ်ကျော်
ကုန်သွယ်ရေး (ပြည်တွင်းဖြတ် ကုန်သွယ်မှု) လုပ်ငန်းအား အဓိက
သည်။ တတိယအမျိုးအစားမှာ နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင်က
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးသော မြန်မာနိုင်ငံသား အမည်ခံ၍ ဘဏ်၌
ကြောင်း သိရသည်။ စင်ကာပူနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များ
အမည်ပြောင်း ငွေစာရင်းဖွင့်ကာ အတိုးရယူနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း
တရုတ်သို့ ကုန်သွယ်ပို့ဆောင်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှလမ်းအသုံးပြုခ
တွင်မူ ဘဏ်တိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၁ ဒဿမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း
သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘဏ်များမှ နိုင်ငံခြားသားအပ်ငွေအပေါ်
ကြားရှိကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြော ကြားခဲ့သည်။
ဘဏ်တိုးနှုန်းပေးရမှုမှာ နိုင်ငံတော်ဘက်ဂျက်ထဲမှ ပေးရသလိုပင်
ဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ လည်း ပိုမိုလာနိုင်ကြောင်း
စီးပွားရေးပညာရှင်များက သုံးသပ် ခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်ထိတိုင်
ပေးနေခြင်းမှာ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် မက်မောစရာဖြစ်
ရောက်ရှိနေကြောင်း ဗပိာုဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား
် က်ခြမ်းမှနေ၍ အိနယ္ဒိ နိငုင်ံ သို့ ကုနသ်ွယပ့်ေို ဆာင်ရာတွင် တရုတဘ
နေကြောင်း၊ အစိုးရမှ ပြည်တွင်းဘဏ်တိုးနှုန်း ကို မပြောင်းလဲပါက
ရေလမ်းကြောင်းကိုသာ အသုံးပြုနေရည်။ (Ref; ကုမုဒြာ)
စ်ခုဖြစ်သည့် ပောာင်ကောင်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များတွင် ငွေသွားရောက်အပ်နှံပါက
ပြည်တွင်းရှိ ဘဏ်များတွင်ဘဏ်တိုးနှုန်း၁၂ ရာခိုင်နှုန်း
တနင်္သာရီကမ်းလွနပ်င်လယ်ပြင်ရှိ ရဲတခွံန် သဘာဝဓာတ်
(Popular News၊ အတွဲ-၃၊ အမှတ်-၂၇ ပါ “နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ရငွေရှိသူတိုင်း အဝေးပြေးကုန်တင်ကား တင်သွင်းခွင့်ရပြီ” သတင်းအား
ငွေ့စီမံကိန်းတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ပက်ထရိုနာ့စ်ကုမ္ပဏီမှအတွက်
အလုပ်လုပ်ပေးနေသည့် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးသည် ဇူလိုင် ၁၁ရက် နံနက်
ဝင်ငွေရှိသူတိုင်းအား အဝေးပြေးကုန်တင်ကားများကို တင်သွင်း
ကားတင်သွင်းခွင့်ပေးရန်အတွက် ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်၌ အဝေး
၉နာရီခန့်က ရဲတံခွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကမ်းလွန် စခန်းရှိ FSO
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများက သတ်မှတ်ထား
ပြေးကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်
(Floating Storage Offshore) ရေယာဉ်ပေါ်မှ ရဟတ်ယာဉ်မှူး
သည့် ကုန်တင်ကားအမျိုးအစားကိုသာ နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ဝင်ငွေရှိ
ရှိသူများအား ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခေါ်ယူဆွေးနွေးခဲ့
အပါအဝင် ၁၁ဦးကို တင်ဆောင်ကာပျံတက်စဉ် ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း
၏ အနောက်ဘက် ပေ ၃၀ အကွာခန့်တွင် မုတ္တမပင်လယ်ထဲသို့ ပျ
အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ်သည် ဇူလိုင် ၁၁ရက် နံနက်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဆီယံစံနှုန်းအတိုင်းကျင့်သုံးရာတွင် အဝေးပြေး
က်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပျက်ကျသည့် ရဟတ်ယာဉ်မှာ
စက်မှု(၂)၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Heli Union ကုမ္ပဏီပိုင် Sikorsky SK 76
အတွက် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားပုိ့ကုန်ဝင်ငွေရှိသူတိုင်း ကုန်တင်
သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများက ညှိနှိုင်း၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်
အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှုတွင် မြန်မာဝန်ထမ်း(၃)
ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း အဆိုပါရဲတံခွန်စီမံကိန်း၏ တာဝန်ရှိသူ
ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ အာဆီယံစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် အောင်မြင်နိုင်
ရန် လမ်းကြေး၊ တံတားကြေး အခွန်ကောက်ခံနေမှုများကို လျှော့
ပေါ့ပေးရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ ကုန်တင်ယာဉ်များလက်ရှိပေးဆော
သေဆုံးသူ(၃)ဦးအပါအဝင် ခရီးသည်များအားလုံးကို ပြန်လည်
င်နေရသည့် အခွန်နှုန်းထားများကိုလည်း လျှော့ချပေးသင့်ကြောင်း
ဆယ်ယူရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူများမှာ တွဲဖက်ရဟတ်ယာဉ်မှူး
ချက်မှာ အဓိကအနေဖြင့် ဝင်ရိုးလေးခုပါသည့် (၁၂ ဘီး)ကား
ကိုသာ တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ထို့ပြင် စက်မှု
(၂)မှ TATA ကားစက်ရုံကလည်း တန် ၂၀ ရှိသည့်ကားများ
လိုအပ်ချက်များကို ညှိနှိုင်း၍ သတ်မှတ်ချက်များကို အလိုလို
ဦးသန်းထွန်းတို့ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ထုတ်လုပ်နေရာမှ တန် ၄၀ ရှိသည့် ကားများကို စတင်ထုတ်
လိုက်နာသွားစေရန် ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း ဆောက်လုပ်
နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ကုန်တင်ကားတင်သွင်းခွင့်ပေးလို
ရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူ မလေးရှား နိုင်ငံမှ PETRO-
က်သည့်အတွက် ပြည်တွင်း၌ ကုန်နှင့် ကားမလောက်ခြင်းများကို
အာဆီယံစံနှုန်းအတိုင်း ဖြစ်နိုင်စေရန် လုပ်ယူခြင်းထက်
NAS၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ နီပွန်ကုမ္ပဏီ၊ ထိုင်း နိုင်ငံမှ PTTEP တို့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ Moe Z
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၉။ (Bi Weekly Eleven၊ အတွဲ-၄၊ အမှတ်-၁၅ ပါ “အရက်၊ စီးကရက်ကဲ့သို့သော ပြည်သူအတွက် ကန့်သတ်ထားသင့်သည့် ကုန်စည်များမှ လွဲ၍ အများပြည်သူသုံး ကုန်စည်အများစုအား ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်၌သာ ကောက်ခံသင့်ပာု လုပ်ငန်းရှင်များသုံးသပ်” သတင်းအား အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြသည်)
ပိုင်ရှင် ဦးတေဇ ပြီးခဲ့သော မတ်လက ရဟတ်ယာဉ်စက်ချို့ယွင်းပြီး ဆင်းသက်ခဲ့ရသည့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့နယ်ရှိ၊ ဖုန်ကန်
ပိတ်ပင်ထားကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ငန်းခွန် ကောက်ခံပါက ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်
တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သီးသန့်
များ၊ သစ်ဥသစ်ဖုများ ရှာဖွေ၍ စားဝတ်နေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်
ကောက်ခံသည့်အခါ၌ ယခုအခါ ကျပ်ငွေဖြင့်သာ ပေးဆောင်ရန်
နေရသူ ဒေသခံများ အနေဖြင့်အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း
ညွှန်ကြားထားသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဖလားနော်ဒင်းမ် က ဆိုသည်။
ယင်းသို့ ပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့် တောင်ပေါ်တွင်ဆေးမြစ်
ထိုသို့ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားခြင်းမှာ ဦးတေဇ
ယခင်ဒေါ်လာဖြင့် ပေးဆောင်နေကျ လုပ်ငန်းရှင်များမှာ ကျပ်ငွေ
အား ပြန်လည်ကယ်တင်ခြင်းမပြုနိုင်မီက ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်ရန်
ဖြင့်သာ ပေးဆောင်ရတော့သည့်အတွက် အခွန်သက်သာခွင့်ရရှိ
ရွက်လျက်ရှိသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုန်သွယ်ခွန်များအပေါ်၌
နေကြောင်း၊ ထိသုို့ ပေးသွင်းရသည်အ့တွက် လုပင်န်းရှငအ်ချင်းချင်း
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် လျှော့ချကောက်ခံသင့်ကြောင်း ပြည်တွင်း
တုဖုန်းများပါသွားပြီး ယင်းတို့ကိုဒေသခံများ ရရှိမည် စိုးသဖြင့်
ထို့ကြောင့် ဒေါ်လာအားကာလပေါက်ဈေးသတ်မှတ်၍ ပို့ကုန်သွင်း
ကုန်အခွန် ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်သင့်ကြောင်း ပြည်တွင်း
နယ်မှ လွှတ်ေတာ်ကယို စ်ားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒေါ်ဘောက်
ဆောင်ရသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ၅၈ မျိုးရှိကြောင်း၊ ၂၀၀၉
ဂျာက ၎င်းကြား သိထားသော အခြေအနေကို ရှင်းပြသည်။
ခုနှစ်၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စာရင်းများအရ ၎င်းကုန်ပစ္စည်း ၈၅ မျိုးထဲမှ
အမှန်တကယ် ကောက်ခံသင့်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားမှာ
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်မည့် အခွန်စနစ်ကို ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း၊
ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ “အဲဒီရိက္ခာထုပ်ကိစ္စကို အတိအကျ
၂၀၊ ၃၀ ခန့်သာ ကျန်တော့ကြောင်း၊ ဥပမာအနေဖြင့်တောင်သူများ
နိုင်ငံတော်မှ ကောက်ခံ လျက်ရှိသော အခွန်များသည် ထုတ်
မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် စက်ချို့ယွင်းနေတဲ့ရဟတ်ယာဉ် ကတော့
လုပ်သူများကို မထိခိုက်သင့်ကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်သူများ ထိခိုက်
အခုထိ ပြန်မသယ်ရသေးဘူ” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
သော်လည်း လယ်လုပ်ကိရိယာကုန်သွယ်ခွန်ကို ၅ ရာခိုင်နှုန်း
မည်ဆိုပါက ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များကိုပါ ထိခိုက်နိုင် ကြောင်း၊
ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ ထိခိုက်မည်ဆိုပါက စားသုံးသူပြည်သူ
အမီပြုပြီး အသက်မွေဝမ်းကျောင်းနေရသည့် ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း
များကိုပါ ဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း လုပ်ငန်းအများစုက သုံး
ဆယ်ခုကျော်နှင့် ရွာပေါင်း ငါးဆယ်ထက်မနည်းရှိကြောင်း သိရ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချမ်းသာဆုံးဟုဆိုသော ထူးကုမ္ပဏီ
ရာဇီတောင်အား ထိုစဉ်မှစပြီး ယခုအထိ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပေး
တစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုသည်။
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အဆင် ပြေနိုင်ကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဘဏ္ဍာအခွန်မှ အကြီးတန်းအရာရှိအဆင့်ဖြင့် အငြိမ်း
စားယူခဲ့သည့် အရာရှိတစ်ဦးကလည်း "ဒီလိုညွှန်ကြားချက် တိတိ ကျကျထုတ်ပြန်လိုက်တော့ နယ်ကိုခရီးမသွားနိုင်သူတွေ၊ ကျန်းမာ
ပင်စင်စားများ ပင်စင်လစာထုတ်ယူရာတွင် အခက်အခဲ
များကြုံတွေ့ခြင်း မရှိနိုင်စေရန် ညွှန်ကြားချက်များကို ဘဏ္ဍာရေး
နှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု
စင်စားများနှင့် နိုင်ငံရေးပင်စင်စားများအား ပင်စင်လစာတိုးမြှင့်
ပေးကြောင်း အမိန့်ကြေငြာစာ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း မည်သို့
ထိုင်ရာမြို့နယ်တွင် မိခင်ဌာနရုံးချုပ်/ရုံးခွဲများ မရှိပါက မိခင်ဌာန
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ညွှန်ကြားချက်များ မထွက်လာ
သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ပင်စင်စားများ အခက်
ကြုံခဲ့ရကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ရန်ကုန်ခရော်နီကယ်သတင်းလွှာတွင်
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ရက်မှစတင်ကာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပင်
ပင်စင်လစာခွင့်ပြုမိန့်မရှိပါကလည်း ပင်စင်လစာစာအုပ် တစ်ခု
ယင်း ပင်စင်စားများသည် နှစ်လွန် ပင်စင်လစာနှင့်တိုး
မြို့အသီးသီးရှိ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲပေါင်း ၂၉၆ ခု၌ ထုတ် ယူ
ယူနိုင်ပြီး၊ ယင်းပင်စင်စား သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ
နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်
ကြီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ တွင် ဆိုသည်။
ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အစိုးရဌာနများမှ ပြီးပြည့်စုံစွာ
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်း ပင်စင်စား (၈)သိန်းကျော်နှင့်
နိုင်ငံရေး ပင်စင်စား(၄) သောင်း ကျော် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
နုငိင်တံကာတွင် အစိုးရသစ်တက်ပြီးသကာလ ရက်ပေါင်း
သည့်အတွက် ယင်းတို့၏ ယခင်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတွင် အဓိကထည့်
၁၀၀ အတွင်းကို ဟန်းနီးမွန်းကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး
သွင်းစဉ်စားသော တည်ငြိမ်ရေးကိုပင် ယခုထိ အဓိကထားနေ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကို မီဒီယာမျက်နှာစာပေါ်တွင် ပြုလုပ်
နေမြဲ ဖြစ်လေသည်။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘား မားဆိုလျှင်
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်းတွင် ကျဆင်းနေသည့် နိုင်ငံ့စီးပွား
လူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး ကိုးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်း၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်
ရေးကို ကယ်တင်ရန် ကန်ဒေါ်လာ ၇၈၇ ဘီလီယံ စီးပွားရေး
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ မြို့မဈေး အများသုံးအိမ်သာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရာ
နှိုးဆွမှု အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ကလေးများ
လူသုံးဦး ဒဏ်ရရှိခဲ့ခြင်း၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင်
နေပြည်တောင် လူမနေသည့်နေအိမ်တွင်လည်းကောင်း၊ မန္တလေး
နိုင်ခဲ့လေသည်။ ယင်းရက်ပေါင်းတစ်ရာအတွင်း ယခင်အစိုးရ၏
လည်းကောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရပ်ကွက်ကြီး (၃) လူမနေသည့်
ရေးရာဝန်ဆောင်မှုများကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးရသည့် ကာလ
နေအိမ်တွင်လည်းကောင်း သုံးနေရာ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရာ လူသုံးဦး
ဖြစ်လေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အသစ်ဆက်ဆက် ဒီမိုက
(မန္တလေး) ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်း စသည့်ဖြင့် စုစုပေါင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု
ရေစီအစိုးရ၏ သမ္မတမှ သမိုင်းတွင် ဂုဏ်ရောင်ပြောင်မည့်မိန့်ခွန်း
ငါးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း အတွက် တည်ငြိမ်ရေးကို အဓိကထည့်
ကာကွယ်မှုတွေ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလို
ပါတယ်" ဟု ပြောကြားသွားလေရာ ယင်းကိုကြည့်ခြင်းအာဖြင့်
ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းကို ကောက်နှုတ်တင်ပြရသော် "မြန်မာ
နိုင်ငံတော်က အာဏာသုံး၍ ဖိနှစ်ထားနိုင် သော်ငြား လည်း
နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို လိုလားသူတိုင်း
အဖွဲ့ချုပ်မှ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တရားဝင် မှတ်ပုံ တင်ခြင်းမပြု
သဘောတရားရေးတိုက်ပွဲမျိုး မှာ ရေရှည်တည်ငြိမ် နိုင်ရေးအတွက်
(တနည်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး)ကိုတော့ အာဏာသုံး
ဖြေရှင်း နည်းမျိုးဖြင့် ဖြေရှင်း၍ မသင့်ပါ။ ယခုအခါ လွှတ်တော်
စိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်၊ တရားဥပေဒ
ယခုကဲ့သို့ ရေတိုသဘောဆောင်သည့် တည်ငြိမ်မှုမျိုးကို
ပေါ်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို
အားလုံးကို ကြိုဆိုမှာဖြစ်သလို အခြေခံဥပဒေပြင်ပက လုပ်ဆောင်
ကိုပြောကြားရင်း နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်လာသည်မှာ ရက်ပေါင်း ၁၀၀
တည်ဆဲအီလစ်များကပင် အာဏာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား
လွှတ်တော်ဘောင်အတွင်း၌ အတက်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းမှသာလျှင် ရေရှည်တွင် လေသည်။
နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်မှုသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှ
၆ ရက် ၄လ တွင်ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းတွင်လည်း
င့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုလည်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံရေးအရ တည်ငြိမ်မှု
"ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရာ မှာ နိုင်ငံသား တွေ
မရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာရှိ မည်သည့်စီးပွားရေး
အလုပ်လုပ်ချင်လာအောင် အစိုးရက အခွင့်အလမ်းတွေပေးပြီး
လုပ်ငန်းစုမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပေ။ မူ
ဆွဲဆောင်ရပါမယ်။ Supply Chain တစ်လျှောက် စရိတ်စကတွေ၊
ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရာ မှာ နိုင်ငံသား
Transaction Cost တွေမများရအောင်စီစဉ်ပေးရပါမယ်။ ကုန်
လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားမည်ဖြစ်လေသည်။ ၃၀ ရက်နေ့က
တွေ အလုပလ်ပုခ်ျင်လာအောင် အစိုးရက အခွငအ့် လမ်းတွေပေးပြီး
ပြောကြားသွားသော သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းတွင်လည်း "ဈေးကွက်
စီးပွားရေးဆိုရာ၌ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူဖွံ့ဖြိုးတိုး
မူနဲ့ထိန်းကျောင်းသွားရပါမယ်" ဟု ပြောကြား သွားလေသည်။
တက်မှုကို ရှေးရှုပြီး ဖွင့်သင့်တာဖွင့်၊ ပြင်သင့်တာ ပြင်၊ ဖိတ်ခေါ်
ထုတ်စွမ်းအားစုတွေ သက်သက်သာသာနဲ့ သုံးစွဲနိုင်အောင် စီမံ
သင့်တာ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပီပီပြင်ပြင်ဆောင်ရွက်သွားမယ် ဈေးကွက်
Cost များကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ် ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်
စီးပွားရေးစနစ်မျိုးကို ရည်မှန်ထားပါတယ်။ - - - ဈေးကွက်ရဲ့
ထိန်းကျောင်းသွားရပါမယ်" ဟု ......
သုံးစွဲနိုင်အောင် လူနဲ့မထိန်းဘဲ Transaction
ထုတလ်ပုသ်ူကော၊ စားသုံးသူပါ အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားနုငိပ်ါသည်။
လွတ်လပ်မှုကို ထိန်းချုပ်လိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရင်းရှင်၊
အစိုးရမှ ပို့ကုန်ခွန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ချပေးနိုင်
ply Chain ကြီးတစ်လျှောက် အခြားသော အပိုကုန်ကျစရိတ်များ
ရည်ရွယ်ပါတယ်။ - - - နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူရဲ့အနာဂတ် လူမှု-စီးပွား
ကိုလျော့ချပေးနိုင်မှသာလျှင် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ ပိုမို
Committee - TISC) ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်လေ သည်။
သွားကြရမှာဖြစ်သလို ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အခွန်
ထိုအတွက်ကြောင့် သွင်းကုန်- ထုတ်ကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှု
အကောက် ဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုလည်း လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ချမှ
နေသည်ဖြစ်ရာ ဘယ်အပိုင်းကစ၍ ကုစားရမည်ဆိုခြင်း ထက်
သည့်အတွက် လက်ရှိအစိုးရမှာ နိုင်ငံတော်က ဈေးကွက်တွင်
လုပ်ဆောင်ရာတွင် တရားဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်
ဒိုင်သူကြီးအဖြစ် တစုံတရာပါဝင်ပတ်သက် ရမည်ဟူသော ကိန်း
သော ကုမ္ပဏီလိုင်စင်လျှောက်ထား မှုကို ၁လ အတွင်းချပေး
အရည်အချင်းမှာလည်း အကန့်အသတ်နှင့်ဖြစ်နေလေရာ ရှိသည့်
ခွန်အားနှင့် အားထုတ်လုပ်ဆောင်ရမည့် သဘော ဖြစ်နေလေ
သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ယခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်များ၊ ခေတ်မီ
ရေးရှေ့ ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအိမ်မက်များကို
ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပြည်တွင်း
မက်နေရမည်ဖြစ်လေသည်။ ယခုလက်ရှိ အစိုးရသစ်၏ လုပ်
ကောင်စီ (Trade Council - TC)ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့လေသည်။
အခွန်ဦးစီးဌာနတို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု များပြု
လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် မကြာမီအခွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အပြောင်း
မရသေးသည့်တိုင် အထောက်အလျှောက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ
ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ကုန်သွယ်ရေး ကုန်သွယ်မှုနှင့်
နှံမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (Tade and Invesment Supervision
Local Journal Quotes
လုပ်တယ်။ အတင်းမာဆုံးလို့ပြောတဲ့ အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်က
ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေရော ဝမ်းရေးအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်
ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊
အများကြီး ဖြေလျှော့ပါတယ်။ အီးယူဆိုပိုတောင်ဖြေလျှော့မှုမြန်ဆ
လုပ်ကိုင် လိုသူတွေပါ အခက်အခဲတွေ့ကုန်တယ်။ နေရာအတည်
န်သေးတယ်။ ကျန်တာတော့ ဒီနှစ်ခုပြီးရင် အလိုလိုမျောသွားမှာပါ။
တကျမရှိ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကလည်း သတ်မှတ်မထားဆိုတော့
ကျန်တာတော့ ဒီနှစ်ခုပြီးရင် အလိုလိုမျောသွားမှာပါ။ အီးယူထဲမှာ
လူေ န ရ ပ် ကွက်ေ တွထဲေ ရာ က် လာြ ပီးေ တာ့ မ လို လား အ ပ် တဲ့
သိသိသာသာပြော ရင် စကင်ဒီနေးဗီးယန်းတွေဆို အများကြီး
ပြဿနာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ စည်းမျဉ်း
တွင်ပါသည့် "အစိုးရသစ်နှင့် ရက်ပေါင်း ၁၀၀" သတင်းဆောင်းပါးမှ
စည်းကမ်း ဥပဒေဆိုတာမျိုး မရှိတဲ့အတွက် Public Area ကို
ချက်ချင်း လက်ငင်း Black and White ပြောင်းဖို့ သူတို့မှာ
အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီအခါ မှာ
အမှန်ကတော့ တားမရမယ့်အတူတူ နေရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့
ဇူလိုင် ၁၄ ထုတ် Venus News အတွဲ (၂) အမှတ် (၄၈) ဦးဇိုဇမ်၏
Community တွေရှိတယ်။ ဥပမာ- ဂျူး Community လိုဟာမျိုး။
အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ပပျောက်လာ မယ်လို့
ပါ၊ ဒါပေမဲ့ နာမည်နဲ့ အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာမှာ ဦးကျော်သူကို
သူတို့ကနေတစ်ဆင့်ဝင်တာတွေရှိတယ်။ အဲဒီတော့ လုပ်သင့်လု
လိကုတ်နုငို မ်ယ်မထင်ပါဘူး၊ ဘာကြောင်လဲ့ဆိုတော့ ဦးကျော်သရဲူ့
ပ်ထိုက်တာတစ်ခုဖြစ်အောင် ချက်ချင်းပြောင်းလို့ တော့မရဘူး။
လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းဟာ စိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်အောင် လှုပ်ရှား
စနစ်မှာ လွှတ်တော်တွေအပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိသြဇာရှိတဲ့ Lobbiest
ဇူလိုင် ၁၃ ထုတ် Weekly ELEVEN အတွဲ (၆) အမှတ် "ခေတ်စနစ်အပြောင်းအလဲတွင်
ချက်ချင်းလက်ငင်း Black and White ပြောင်းဖို့တော့ မလွယ်ဘူး။
ရေးကဏ္ဍ၌ အကျုံးဝင်နေသောအရာများအားလုံးကို ယဉ်ကျေးမှု
သို့သော် ဘာပဲပြောပြော အရင်နဲ့မတူတာတော့ သေချာတယ်။
တွင်ပါသည့် "နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွင်
အားလုံးက ဖြေလျှော့လာတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ သွားမှာပဲ"
တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အပေါ် ကောက်နှုတ်ချက်
ဇူလိုင် ၁၄ ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ် အတွဲ (၇) အမှတ် သတင်းဆောင်းပါးမှ
ခန့်ထားရန် အစီအစဉ်ရှိ" သတင်းမှ အလင်းတန်းဂျာနယ်မှ ဆရာ
(၂၆) တွင်ပါသည့် "ရက် ၁၀၀ အရွေ့နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အချိုးအကွေ့"
ဇူလိုင် ၁၁ ထုတ် The Messenger အတွဲ (၂) အမှတ် (၈)
ဦးဝင်းငြိမ်း၏ ပြောကြားချက်အပေါ် ကောက်နှုတ်ချက်
"ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၄ မှာ ပေးထားတဲ့
တိုင်းပြည် အတွက် တန်ဖိုးရှိသလို မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ အမျိုး
လွတလ်ပ်စွာပြောဆိခုငွ၊့် ထုတ်ဖော်ခငွ၊့် ရေးသားခွင၊့် အဲဒမှီာ စတုတ္တ
အများကြီးပေးဆပ်ရမယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကချည်းပဲ ရဖို့ မစဉ်းစား
အမြင်တို့သည် ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတို့၌ မကွာသောအမြင်
တကယ်အသက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာ ပြဖို့အတွက် အခြေခံ ဥပဒေ
တို့ရခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို မြန်မာ့လယ် ယာစီးပွား၏
ဆိုင်ရာကနေ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့
ဘာတွေ လိုပါမည်နည်း။ လောလောဆယ် မိမိအနေအထားကို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာကို ကွပ်ကဲနိုင်တဲ့ စနယ်ဇင်း ကောင်စီလို၊
သတင်းမီဒယီာသမားတွေကို ကာကွယ်ပေးတဲဥ့ပဒေ ကျွန်တော်တို့
နိုင်ငံမှာလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုဝန် ထမ်းတစ်ယောက်ကို
တွင်ပါသည့် ဆောင်းပါးရှင် ဦးခင်မောင်ဆွေ(NDF) ၏ "ပြောင်းလဲရ
ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းရန် အစပြုသည့် အနေအထားဖြစ်သည်။
မယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲပေါ့ ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုဖြစ်ဖြစ်
ထက်သန်သူများပါ ရောနှောပါရှိနေနိုင်သည်။ ဒီမိုကရေစီ လိုလား
တော်က အခုအများကြီး ပြောင်းလဲပေးဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါ
သန်သော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ အားထုတ်ကြိုး ပမ်းကြမှ
အခုကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာ မရှိတဲ့အခါကျတော့ ဥပဒေပေါ်လာ
တယ်။ နိုင်ငံတော်က ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေတဲ့ မူဝါဒများနဲ့အညီ
ရှင်းလင်းလွယ်ကူပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ အခွန်စနစ် Sim-
ple and Transparent Tax System ဆိုတဲ့စနစ်ကို ပြောင်း
(၄၁) တွင်ပါသည့် "Hot News ဂျာနယ်တွင်ပါသော ပုဂ္ဂလိ
(၅၁) တွင်ပါသည့် အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကောက်နှုတ်ချက်
ကဆေးရုံ SSC ၏ဝန်ဆောင်မှု" သတင်းဆောင်းပါးနှင့်ပတ်သက်၍
SSCက တရားစွဲထား၊ သတင်းအချက်အလက် မှန်ကန်သဖြင့်
အဲဒီနေရာမှာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ လုပ်ငန်းအသင်း
တောင်းပန်ခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်း၊ အမှုကိုရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု Hot
News ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်ပြောကြား"မှ ရှေ့နေ ဦးသိန်းညွှန့်၏
လူတွေအားလုံး မျှော်လင့်ထားတာက များတော့ မျှော်လင့်ထားတာ
"ယခုအခါ ဥပဒေပြုရေးနယ်ပယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု
ဇူလိုင် ၁၃ ထုတ် Weekly ELEVEN အတွဲ (၆) အမှတ်
ထို့ကြောင့် အကူးအပြောင်းကိစ္စတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင် ပေးရမည့်
သော ပြည်သူများနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစိတ် ဓာတ် ထက်
ဇူလိုင် ၁၄ ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ် အတွဲ (၇) အမှတ် (၂၆)
ဇူလိုင် ၁၃ ထုတ် Weekly ELEVEN အတွဲ (၆) အမှတ် (၄၁)
ဇူလိုင် ၁၄ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် -----------------------------------------------------------"အစိုးရကို ရက် ၁၀၀ လောက်နဲ့ကောက်ချက်ချရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက
တွင်ပါသည့် "အခွန်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအခြေ
ဇူလိုင် ၁၄ ထုတ် 7DAYS အတွဲ (၁၀) အမှတ် (၁၇)
တော့မည်။ ဤသည်ကား အခြားမဟုတ်ပါ။ မြန်မာ့စီးပွားဖွံ့ထွားရေး
လုပ်ငန်းရှင်များ အသိပေး" သတင်းဆောင်းပါးမှ မြန်မာနိုင်ငံ
သတင်းဆောင်းပါးမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦး၏ ပြောကြား
လမ်းစရှာဖွေမှုအဖြစ် လယ်ယာစီးပွားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိ
ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနှင်းဦး၏ ပြောကြားချက်
အခြေအနေသစ်တို့၏ အရိပ်အယောင်ကို စတင်မြင် တွေ့နိုင်ပေ
skin colour (အသားအရောင်) အစရှိသည့် မတူကွဲပြားမှု (dif-
တစ်ခု (Ideology isaway of thinking) ဖြစ်သည်ဟု
ference) များကို လက်ခံနိုင်ခြင်း ရှိကြလေသည်။ သို့သော်
အဘိဓာန်တွင် အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းထားလေသည်။ လူအသိ
ယင်းတို့မှာ စီးပွားရေးအရ ရှေးရိုးစွဲများဖြစ်ခြင်းကြောင့် အခွန်အခ
ပါဝင်ပတ်သက်မှုများရှိလေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယင်းစနစ်ကို
အဓိကကျင့် သုံးသော အနောက်ဥရောပရှိ စကင်ဒီနေးဗီးယား
ကြောင်းများဖြစ်သည်ဟု ယေဘူယျအားဖြင့် ယူဆနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော ဟော်လန်နိုင်ငံဆိုလျှင် အစိုးရမှ နိုင်ငံသား
တစ်ဦး ရရှိသော ဝင်ငွေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကောက်ခံခြင်းကြောင့်
နှင့် ကွန်မြူနစ်စနစ်မှာ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် အပြင်းအထန်ပြိုင်
နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ လစာ ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိသော်လည်း
ဆိုင်ခဲ့သည့် အိုင်ဒီယိုလိုဂျီများ ဖြစ်လေသည်။
ယင်းတို့အလုပ်မရှိသည့်အခါ အစိုးရမှ တစ်စုံတစ်ရာ ထောက်ပံ့
ပေးထားမှု များရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခမဲ့နီး ပါး
မြန်မာ့စာပေလောကတွင် အိုင်ဒီယိုလိုဂျီကို "ဝါဒမီး" ဟု
သုံးနှုန်းခဲ့ကြသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အိုင်ဒီယိုလိုဂျီမှာ လက်
တွေ့မဆန်သည့် တရားသေဆန်သော သဘောတရားများလည်းရှိ
ရေးတွင် ရှေးရိုးစွဲများမဟုတ်ကြသော်လည်း လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံ
စီးပွားရေးအရ လွတ်လပ်သူတိုင်းမှာ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံ
"အခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေ"ဟု စပ်ဆိုထားသဖြင့် ဝါဒမီး
(လွှတ်လပ်သူများ) ဖြစ်သောသူများသည် ဈေးကွက်တွင် အစိုးရ
ရေးတွင် ရှေ့ရိုးစွဲများဖြစ်နေကြသူတိုင်းကတော့ စီးပွားရေးအရ
လွတလ်ပ်မရြှုိ ကသူများ ဖြစ်လေသည်။ စီးပွားရေးအရ လွတလ်ပ်သူ
အချို့မှာ လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်အားလုံးကို လက်မခံသည့်တိုင်
သည်။ သို့သော် နောက်ကွယ်အယူအဆအတွေး အခေါ်အခံ
လူမျိုးစုအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ Gay အခွင့်အရေး၊
မရှိဘဲနှင့် နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို လုပ်၍တော့မဖြစ်။
်ံရေးတွင် ရှေးရိုးစွဲများ(Socially and politically conservative) နုငိင
အသားအရောင်ခွဲခြားမှုမရှိခြင်းစသည့် မတူကွဲပြားမှုတွေကို စိတ်
ဖြစ်ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့သည် လူအဖွဲ့အစည်း
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးပေါ် ထားရှိမည့် သဘောတရားများကို
အတွင်း လူမှုရေးအဆင့်များ၊ တန်ဖိုးများရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည့်
အတွေးအခေါ်ပိုင်းကွဲပြားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် အများ
ထုတ်ဖော်ကြေငြာကာ ရွေးကောက် ပွဲဝင်ခဲ့ကြလေသည်။
ဆုံးတွေ့မြင်ကြလေသည်။ ပါတီ အသီးသီးမှ ယင်းတို့ မူဝါဒ၊ ရပ်တည်
ပေါ်လစီများကို လက်မခံခြင်းဖြစ်လေသည်။ တဖန် လူမှုရေးနှင့်
ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး ပြည်သူများ အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသင့်
နိုင်ငံရေးတွင် လွတ်လပ်မှုရှိသော သူများမှာ အခမဲ့ကျန်းမာရေး၊
သည်များကို ဟော ပြောစည်းရုံး၍ မဲရရှိအောင်ကြိုးစားရလေသည်။
ကြီးစိုးပုံကို ဆင်ခြေသုံးသပ်ကြည့်ပါက မတူညီသည့် အသွင်ကွဲ
ပညာရေး၊ ပင်စင်ရန်ပုံငွေများ ထားရှိခြင်းစသည့် လူမှုဖူလုံရေး
အစိုးရသစ်တက်လာပြီးသည့် ရက် ၁၀၀ ပြည့်တွင် အစိုးရချမှတ်
အဆင်ကွဲများရှိနေပုံကို တွေ့မြင်ရလေသည်။ စီးပွားရေး Liberal
မူဝါဒများ အကောင်အထည် ဖော်သည့်အပြင် gay right နှင့်
အကောင်အထည်ဖော်သည့် အရေးကြီးသည်ဟု ယူဆရသော
ဤနေရာ၌ မတူညီသည့် အိုင်ဒီယိုလိုဂျီများက နိုင်ငံ၏
ဂိုဏ်းဂဏအစွဲများသည် . . .
ညနေပိုင်း ရုံးဆင်းချိန်အတွင်း မြို့တော်ရဲ့ လူသွားလူလာ
စည်ကားတဲ့ နေရာတွေမှာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မိနစ် ၂၀ စီလောက်ပဲ ခြားပြီး ပေါက်ကွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုံး ၂ လုံးက မွမ်ဘိုင်းမြို့ရဲ့ မူဝါဒများကို သုံးသပ်ကြည့်လျှင် (၁) ယခင် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်
တောင်ဘက်နဲ့ တလုံးက မြို့ လယ်ခေါင်မှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။
လုပ်ငန်း အချို့တွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု
ဘယ်သူကမှ သူတို့လက်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ မပြောသေး
ဒီဖောက်ခွဲမှုတွေဟာ ဟန်ချက်ညီ ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်တဲ့
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး
ပီ-ချိုင်ဒမ်မ်ဘာရမ်မ် (P. Chidambaram) က ပြောပါတယ်။
ဝေဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းတွေ့ရလေသည်။ အစိုးရသစ်
အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏ အဓိက ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော စိုက်ပျိုး သီးနှံကို
အနေနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိကြဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့
သူက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ ချိုင်ဒမ်မ်ဘာရမ်မ်ဟာ ဇူလိုင်လ
နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ထိရောက်သော စည်းမျဉ်းစည်း
၁၄ရက်နေ့မှာ မွမ် ဘိုင်းမြို့ကို သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာ
မွမ်ဘိုင်းမြို့နေလူထု အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးကလူတွေ
လက်လုပ် ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖောက်ခွဲခဲ့တာ
ကိန်းမော်ဒယ် ဘောဂဗေဒမှာ ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင်လည်း လားရာတစ်ခု
ဖြစ်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ယူဆထားပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှု ၂ ခုဟာ
အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်နေလေသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ
မော်တော်ကားတွေမှာ ဗုံးတွေဆင်ပြီးတော့ ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး
သည် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ၏ သတ်မှတ်ထား ချက်အရ ဆင်းရဲမွဲတေ
နောက်တခုကတော့ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြီးပေါ်က လျှပ်စစ်မီတာ
သေတ္တာ အပေါ်ဘက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
အတွက် အစိုးရမှ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့ချရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေး
ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်နေ့က ၃ ကြိမ်ဆက်တိုက် ဗုံး ပေါက်ကွဲတာကြောင့်
ဒီဖောက်ခွဲမှုတွေကို ပါကစ္စတန် အစိုးရကရော အိန္ဒိယဝန်ကြီး
ငါးနှစ်သက်တမ်း အတွင်းမှာပင် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲ ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခု အဖြစ်မှ လွန်မြောက်နိုင်ပါကြောင်း..........။
ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ Ref; VOA
ဖွေထိုင်းပါတီ (Pheu Thai) အပေါ် တရားသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေကြောင်း . . .
အဘီဆစ် ဝိတ်ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva) ရဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရမှုကိုလည်း မဲဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကြောင့် ကော်မ ရှင်က အခုထက်ထိ အတည်ပြု မပေးသေးပါဘူး။ သူ့ပါတီ ရှုံးနိမ့် တယ်
တရားဝင် ဝင်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်လတ်ရဲ့ ပါတီက တခြားပါတီငယ်လေးတွေနဲ့ ပေါင်း ပြီးတော့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
မစ်စ်ယင်လတ်အပေါ် ဘယ်လိုစွပ်စွဲ တိုင်တန်းထားတယ်
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဇူ လိုင်လ ၁၂ရက်နေ့ နှောင်းပိုင်းအထိ
ဆိုတာကိုတော့ ကော်မရှင်က ထုတ်ဖော် မပြောပါဘူး။
ခံနေရပေမဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ဖို့အတွက်
ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ယင်လတ် ရှင်နာဝပ်
အမတ် ၅၀၀ ရှိတဲ့အထဲက ၄၇၅ နေရာကို အချိန်မီ အတည်
(Yingluck Shinawatra) က ပြော ဆိုလိုက်ပါတယ်။
(Pheu Thai) အပေါ် တရားသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပေး နိုင်လိမ့်မယ်လို့
စတင်ခေါ်ယူပြီး အလုပ်စတင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနိုင်ရထားတဲ့ စုစုပေါင်း အမတ် ၅၀၀ ထဲက မစ်စ်
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနဲ့ သူမရဲ့ ဖွေထိုင်းပါတီ
ယင်လတ် အပါအ၀င် ၁၄၂ ယောက်ကို မဲမသမာမှု အပါအဝင်
တခြား စွပ်စွဲချက်တွေ ရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အနိုင်ရမှုအပေါ်
နှုတ်ထွက်ပေးရတော့မယ့် အရင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း
သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းမှာ Ref; VOA
ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်နေ့က ကြေညာ
ခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းအသစ်ထဲမှာ ပြည့်စုံပြီး စည်း စနစ်ကျတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရည်မှန်းချက်တွေ နဲ့ အဲဒီရည်မှန်းချက်တွေရရှိအောင်မြင်ဖို့ . . .
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်
(Hillary Clinton) ဟာ အခုလကုန်ပိုင်းမှာ ဟောင်ကောင်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွေကို ခရီးထွက်ပါလိမ့်မယ်။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ရဲ့
နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ဖို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးရုံးတို့က ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်
ဘာလီကျွန်းကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ၀န်ကြီး ကလင်တန်
ကြီးကြပ်မယ်လို့ ဆင်ဟွာက ဆိုပါတယ်။
ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ အမေရိ ကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက
တရုတ်အစိုးရဟာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ ဘာသာရေး
ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် အာဏာ
အသစ်တခုကို ရေးဆွဲနေတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
မြောက် စေ့စပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ ကတိကဝတ်တွေ ရှိထားတဲ့အတိုင်း
ဆောင်ရွက်ရေး ဒီနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်မှာ
ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့တဲ့ စီမံကိန်း အသစ်
အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ အမေရိကန်အကြား မဟာဗျူဟာ
ထဲမှာ ပြည့်စုံပြီး စည်းစနစ်ကျတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရည်မှန်းချက်
တယ်။ ဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့
တွေနဲ့ အဲဒီရည်မှန်းချက်တွေ ရရှိ အောင်မြင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်
အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အဓိက သီအိုရီတွေနဲ့ စံနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါ
လုပ်ငန်းအဆင့်တွေ ထည့်သွင်း ထားတယ်လို့ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ
တယ်။ တရုတ်တို့ဘက်ကတော့ လူသန်းပေါင်း ၁,၃၀၀ တို့ရဲ့
ရှားကနေ ဟောင်ကောင်ကို ခရီးဆက်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီမှာ အာရှ၊
သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေး အကြီးအကဲ ၀မ်န်ချန်း (Wang Chen) ကို
လူနေမှု အဆင့်အတန်း တိုးတက်တဲ့အပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး
ပစိဖိတ် ဒေသတွင်း အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုနဲ့
ကိုးကား ပြီး နိုင်ငံပိုင် ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ကြေညာပါတယ်။
ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုပါတယ်။
ပတ်သက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေကို မသွားခင်
ဒီစီမံကိန်းကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်ဟာ အင်ဒိုနီး
အိန္ဒိယ၊ ဂရိနဲ့ တူရကီ နိုင်ငံတွေကို ခရီးထွက်ပါလိမ့်မယ်။ Ref; VOA